Iindawo zeplastiki-iMestech Industrial Limited
Iindawo zeplastikiZisetyenziswa ngokubanzi kwi-elektroniki, izixhobo zombane, unyango, ifanitshala yasekhaya, imoto, inqwelo moya, ishishini, isixhobo kunye namanye amashishini. I-resin yeplastiki inokufudunyezwa kwisikhunta sokufumana iintlobo ezahlukeneyo kunye nobukhulu beeplastiki kunye neemveliso. Kuxhomekeke kuphuhliso lobuchwephesha beekhemikhali zangoku, ngakumbi nangakumbi iintlobo zeeplastiki ziveliswa ngomlinganiselo omkhulu.
IMestech ibandakanyeka kuyilo lwamalungu eplastiki, ekwenziweni kwenaliti yokubumba kunye nenaliti yokubumba iinxalenye kunye neemveliso, kunye neenkqubo zasemva konyango ezinje ngokupeyinta isitshizi, ushicilelo lwesilika kunye nokufakelwa kombane. Iimveliso zethu zeplastiki kubathengi zezi zilandelayo:
Indlu yeplastiki yombane
Iinxalenye ziphene yokubumba
Medical ziphene zeplastiki yokubumba nokubumba
Iimveliso zeplastiki ngaphaya
Ukucwangciswa kweposi kweeplastiki
Iphaneli yePlastiki ene-3D nano yokushicilela isikrini
Izixhobo zombane zeOfisi
Iimveliso zeplastiki zenayiloni
Isinyithi faka ukubumba
Iimpawu zeemveliso zeplastiki:
1 ubunzima bokukhanya Inokusetyenziselwa ukwenza izinto ezinobunzima kunye neemveliso.
2 Ukuzinza kweekhemikhali kunye nokumelana nokumelana neplastics Uninzi lweplastikhi lukwazi ukumelana ne-asidi, ialkali kunye nezinye iikhemikhali.
I-3 yokugquma ngombane ngokugqwesileyo, Iiplastikhi eziqhelekileyo zii-conductor zombane ezihlwempuzekileyo, kunye nokumelana nomphezulu kunye nokumelana nevolumu kukhulu kakhulu. Ke ngoko, iiplastiki zisetyenziswa kakhulu kumzi mveliso we-elektroniki kunye noomatshini. Njengentambo yeplastikhi yokulawula igqunyiwe.
4 Ubushushu obufanelekileyo bokufudumeza Ubushushu beplastikhi busezantsi, bulingana ne-1 / 75-1 / 225 yentsimbi,
Uluhlu olubanzi lwe-5 yamandla oomatshini. Inamandla aphakamileyo aphezulu Iipropathi zoomatshini beplastikhi, ezinje ngobulukhuni, ukuqina, ulongolo kunye nefuthe lamandla, zisasazwa ngokubanzi. Ngenxa yomxhuzulane wayo omncinci kunye namandla aphezulu, iiplastiki zinamandla athile aphezulu.
Inokuchasana nefuthe elilungileyo, ukuphelisa ingxolo kunye nokutsalwa ngumothuko.
7 Ukumelana kakuhle nokunxiba kunye nokungafihli nto
8 Iiplastikhi ezilungileyo: kulula ukubumba iimilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu beemveliso ngokufudumeza umngundo, ukuze uqonde imveliso enkulu kunye nokusebenza ngokufanelekileyo.
IMestech ngumenzi wobuchule wenaliti yokubumba kunye neeplastiki. Sinokubonelela abathengi ngeentlobo zeemveliso zeplastiki kunye neenkonzo, sijonge phambili ekusebenzisaneni nawe.Nceda unxibelelane nathi xa kukho imfuneko.